Ukuphupha imaski yerhasi Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Phupha neMask Yerhasi
Ixesha elithi imaski yegesi ngokwenyani iyindlela yokubonisa ukuphefumla yeABC okanye imaski yokukhusela. Oku ikakhulu kwenzelwe ukukhusela umsebenzisi ekuphefumlweni kwiityhefu ezinjengeegesi zamachiza okanye uthuli. Ezi maski zifumaneka kumacandelo omkhosi nakwezoluntu.
Iimaski zokuphefumla ziyafumaneka njengeemaski zobuso ezipheleleyo ezigubungela yonke indawo yobuso. Ngamanye amaxesha ezi zinokukhumbuza imask yokuntywila. Kukho ukwahluka kwesiqingatha okanye ikota iimaski. Ngeemaski zesiqingatha, kuphela impumlo nomlomo ezifakwe imaski yokukhusela.
1 Uphawu lwephupha «imaski yerhasi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yokulala «imaski yerhasi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «imaski yerhasi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «imaski yerhasi» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwinqanaba eliqhelekileyo lohlalutyo lwamaphupha, uphawu lwephupha "imaski yegesi" inokumela umntu ophuphayo. Ukuphathwa gadalala okanye ndikulumkise ngokuhlaselwa ngamazwi ngabantu abakungqongileyo. Umntu ekuthethwa ngaye unokwenzakaliswa ngabantu abasondeleyo kuye ngokunyelisa okanye ngolunye ulwimi olubi.
Ukuba umphuphi ngokwakhe unxibe imaski yokukhusela i-NBC ephupheni lakhe, unokuba noxanduva Ukungcatsha en el mundo uvuke kwangoko. Kuba umntu kusenokwenzeka ukuba angcatshe umntu oleleyo okanye asasaze amarhe amabi. Ukuba amajoni anxibe iimaski zerhasi ngelixa ulele, mhlawumbi nasemseleni, kuya kufuneka ucwangcise ngakumbi kwaye unganiki joliso kwabanye abantu.
Ukuba ubona abacimi-mlilo benxibe iimaski zokuphefumla kunye nabalawuli ephupheni lakho, mhlawumbi kwanaxa kuthe kwatsha umlilo okanye indlu, oku kungabonisa ngokubanzi ukuba ufuna ukuzikhusela kuhlaselo lwabahlobo bobuxoki. Abantu abaninzi abanxibe iimaski zegesi ngelixa belele banokuba nomfanekiso wephupha Ukungaqiniseki kwaye ubonise ukungazithembi.
Ukuba umntu unxibe imaski yegesi ephupheni ngexesha lokuhlaselwa okanye umlo, uhlala efuna ukuzikhusela ekuxazululeni ubundlobongela. Ukuba umphuphi kwimask okhuselayo ukwibunker ngexesha lebhombu, kufuneka omeleze ukuzithemba kwakhe kwihlabathi elivukayo ukuze abonakale omelele kwabanye.
Ukuba irhasi isetyenziswa njengesixhobo emfazweni kwaye imaski enjalo kufuneka inxitywe, kungacetyiswa ukuba lo mntu kuthethwa ngaye ajongane neemvakalelo ezazicinezelwe ngaphambili okanye ezazicinezelwe.
Ukuba woyika ukuphefumla kancinci, ukuphefumla kancinci, okanye ukufa Ukusuka ekuxineni xa unxiba imaski yegesi ephupheni lakho, unokoyika impembelelo enamandla evela kwabanye abantu kwihlabathi elivukayo. Ukuba umntu olalayo kufuneka akhohlele phantsi kwemaski yakhe yokukhusela ephupheni, uhlala ezama ukufihla ukungazithembi kwakhe ngasemva kwembonakalo enamandla.
Isimboli yokulala «imaski yerhasi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, umfanekiso wephupha lesigqumathelo segesi unokubhekisa kulowo uleleyo ukunqanda iingcinga ezimbi okanye ulindelo olugqithisileyo. ukukhusela. Kungenxa yokuba aba sele beqala ukumchaphazela ngokungathandekiyo, ke ufuna ukuyichasa le mpembelelo.
Nabani na onxibe imaski yegesi ukukhusela irhasi ephupheni lakhe angayoyika. imeko eyingozi kwihlabathi elivukayo. Ukunxiba imaski njengesihluzi kuthuli okanye kumsi kunokubhekisa kwimizamo yokulala ukunqanda ingxaki ezayo.
Ukuba umphuphi uphefumla umoya ngesigqubuthelo sokukhusela ngelixa elele, uya kuba nakho ukususa imiqobo ekuvuseni ubomi ukuze aphile amandla akhe okudala engaphazanyiswa. Ukuba unxiba into yokuphefumla xa ulele ukukhusela umsi, kuya kufuneka uwufumane ngqu zulwano kudala ikhona.
Ukuba imaski yegesi ibonwa okanye isetyenziswe njengomntwana ephupheni, kuya kufuneka uqaphele ukuba uthanda uhlobo oluthile kubudlelwane bakho. umgama iyaqokelela. Kwindawo yesondo, unokuba nengxaki yokuhlala nabanye abantu.
Uphawu lwephupha «imaski yerhasi» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kutolika imaski yegesi ephupheni ngokusekwe kwisimboli yephupha «imaski» njengentsingiselo kumntu ophuphayo ukuba yonke into ebomini. Ekugqibeleni yi. Ekuvukeni kobomi ngekhe ukwazi ukuzikhusela kolu luhambo ludlulileyo, kodwa kuya kufuneka uyamkele le nyani.